मुख्य पृष्ठसमाचारसेतो रतुवा मृग सदर चिडियाखानामा
काठमाडौँ / जङ्गलमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ ।
घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो । सदर चिडियाखानाका भेटनिरियन डा. पर्वतजङ्ग थापाले सेतो रतुवामृग चिडियाखानाले जिम्मा लिएको बताए ।
अभिभावक गुमाएको अवस्थामा भेटिएको सेतो रतुवा मृगलाई चिडियाखानामा राखेर हेरविचार तथा संरक्षण गरिने उनले बताए । यो प्रजातिको मृग लाखौँमा एक मात्रै भेटिने भन्दै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । भर्खरैको मृग भएका कारण अभिभावक नभएको अवस्थामा जङ्गलमा बस्न गाह्रो हुने भएकाले यसको संरक्षणका लागि चिडियाखानामा राख्नुपरेको डा. थापाले उल्लेख गरे ।
भेटनिरियन डा. थापाले आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका पनि अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा भेटिएका जनावरलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने गरेको बताए । उद्धार गरिएका जनावरहरू प्राकृतिक वातावरणमा रम्नसक्ने अवस्था भएमा प्राकृतिक वातावरणमै छाडिदिने र प्राकृतिक वातावरणमा उनीहरूको जीवन सङ्कटमा परेको अवस्थामा भने चिडियाखानामै राखेर संरक्षण गरिने उनले बताए ।
चिडियाखाना लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृग